एउटा पिच रोड जुन टिकटकका कारण रातारात हिट भयो - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार एउटा पिच रोड जुन टिकटकका कारण रातारात हिट भयो
एउटा पिच रोड जुन टिकटकका कारण रातारात हिट भयो
भिडियो सेयरिङ सञ्जाल टिकटक आजभोलि युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय बनेको छ ।टिकटकबाट केहीले दाम र नाम दुबै कमाएका छन् भने केहीले ज्यान नै गुमाएका छन् ।
केही चिज भाइरल बन्नका लागि टिकटकमा समय लाग्दैन । तर किन र कसरी भाइरल बन्छ भन्ने कुरा भने थाहा हुँदैन ।
आजसम्म सामान्य लागेको कुरा भोलि वा रातारात भाइरल बन्न पुग्छ टिकटकमा ।न्यूरोडको छाता होस् वा तीनधारे झरना एकाएक टिकटकमा हिट भए र सेलाएपनि यस्ता स्थान थुप्रै छन् जहाँ पुगेर मानिसहरुले टिकटक बनाए ।
केही व्यक्ति र पात्र पनि टिकटकमा हिट भए । नयाँ नयाँ पात्रले स्थान पाउँनका लागि वा चर्चामा आउनका लागि विभिन्न स्वभाविक र अस्वभाविक हर्कत गरिरहेका हुन्छन् ।
पीच सडक रातारात हिट
देशमा कयौं स्थानमा कालोपत्रे सडक छन् ।ओहो ! भन्नेदेखि छ्या भन्ने खालका पिच सडक छन् । तपाईं हामी पनि दैनिक कयौं किलोमिटर यात्रा यस्तै सडकमा गरिरहेका छौं तर दाङमा एउटा सडक खण्ड रातारात हिट भएको छ ।कयौं किलोमिटर परदेखि मानिसहरु उक्त रोडमा आउँछन् , भिडियो बनाउँछन् र भन्छन् ‘खासै केही रहेन छ खै किन आएका हुन् सुबै ।’
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्न सडक करिब एक सातायता सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको हो।घोराही–१०, नारायणपुरदेखि वडा नं. ११ हुँदै १२ को सिमलकुटीसम्म करिब ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत घोराही–११, झुम्केटाडी निकै भाइरल भइरहेको छ। त्यहाँ भिडियो बनाउनको लागि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट टिकटक प्रयोगकर्ताहरू पुग्ने गरेका छन ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियोदेखि पछि आफू पनि हेर्न आएको शान्तिनगर–२, अमुवाबाट आएका राकेश खत्रीले बताए । ‘टिकटकमा निकै हिट थियो त्यही भएर हेर्न आएको । खासै केही त रहेनछ । तर मानिसहरुको भीड रहेछ । सायद शनिवार भएर होला ।’स्थानीय हर्क बहादुर ओलीले एक सातायता उक्त सडकमा आउने भिडियो बनाउनेको भीड बढेको बताए । कालो पत्रे सडक सर्प घुमे जस्तै देखिने भएका कारण टिकटक बनाउनेहरुको भीड जम्मा भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
Previous articleप्रि ओपनमा के भयो निफ्राको शेयर मुल्य
Next articleबोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुका फाइदा यस्ता छन्
पल, गरिमा, दुर्गेस र रुचीको ‘टिकटककी क्विन’ सार्वजनिक